Sunday June 24, 2018 - 19:24:23 in Wararka by Super Admin
Madaxweyne Mnangagwe ayaa xiliga uu ka badbaadayay isku dayga dilka ah ku sugnaa garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala Magaalada Bulawayo oo ah magaalada labaad ee ugu weyn wadanka Zimbabwe, waxa uuna kula hadlayey kumanaan dad ah oo isugu soo baxay garoonka.
Markii uu dhameystay khudbadii u jeedinayey oo uu damcay in uu ka dhaqaaqo fagaaraha ayaa lala beegsaday Bomb gacmeed lagasoo tuuray meel aan sidaa kaga fogen halkii uu kasoo dhaqaaqay, taas oo ku dhacday meel ujirta wax ka yar hal Mitir oo toos ah.
Video lagu faafiyey baraha internetka oo ay duubeen kooxo saxafiyiin ah oo madaxweynaha la socday ayaa laga arki karaa, isaga oo sii dhaqaaaqaya iyo bambka oo ka imaanaya dhankiisa bidix, ilbiriqsiyo gudahoodna ku qarxaya.
Tiro dad ah oo la socday madaxweyne Mwangagwe oo ay kujiraan ku xigeenadiisa, waziirro dowlada katirsan iyo ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay Bomb gacmeedkan halka tiro kale oo dad ahna ay ku dhinteen.
War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha Zimbabwe ayaa lagu sheegay in Constantino Chiwenga iyo Kembo Mohadi oo kala ah labadiisa madaxweyne ku xigeen iyo waziir dowlada katirsan ay ku dhaawacmeen weerarkii lala damacsana in lagu khaarijiyo, isagoona ku sifeeyey weerarka mid fulaynimo ah.